Abavelisi kunye nabaxhasi beetafile zeTafile - iChina iZilayidi zeZilayidi zomzi mveliso
35mm Automatic Ukuphakamisa Extension Dining Itafile yesilayidi
Isilayidi sethu seTafile yokuTya yokuThoba ngokuZenzekelayo eyi-35mm eyenziwe ngomatshini ophezulu wokuchaneka. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iindlela ezingama-35mm zesilayidi setafile yedinning ngaphandle kokungqamanisa
Intshayelelo:I-35mm yethu yeendlela ezimbini zokongezwa kwetafile yesilayidi ngaphandle kongqamaniso olwenziwe ngumatshini wokuchaneka okuphezulu. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-35mm yolwandiso lwetafile yesilayidi sokudibanisa kunye nesitshixo
Intshayelelo:Isilayidi sethu sokudibanisa ityhubhu yokutya yangoku engama-35mm kunye nesitshixo esenziwe ngomatshini ophezulu. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ukunyuka kunye nokuwa kwesilayidi setafile yescreen ye-telescopic
Intshayelelo:I-35mm Rise & Fall telescopic itafile yokwandiswa kwesilayidi esenziwe ngomatshini ophezulu wokuchaneka. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ububanzi besitayile seteleskopic esilayidi setafile yedinning eyandisiweyo
Intshayelelo:Ububanzi betreyini yethu yeteleskopu ebanzi engama-48mm yeetafile zedinning ezandisiweyo ezenziwe ngumatshini ochanekileyo. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
48mm Isilayidi setafile yendlela enye
Ibhola ye-telescopic ye-48mm ethwele itafile yolwandiso
Intshayelelo:Ibhola lethu le-telescopic eline-48mm elithwala itafile eyandisiweyo eyenziwe ngomatshini ophezulu. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-YA-4804 ishedyuli yesitayile setafile yesilayidi eyandisiweyo yesilayidi
Intshayelelo:Isilayidi sethu setafile ye-YA-4804 ye-telescopic yesilayidi esenziwe ngumatshini ochanekileyo. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Icandelo leSilayidi esongelayo setheyibhile (indlela yetafile yolwandiso)
Intshayelelo:Isilayidi sethu setafile esongelayo yamacandelo amaninzi (umatshini wetheyibhile yolwandiso) eyenziwe ngumatshini wokuchaneka okuphezulu. Sinobubanzi abangama-35mm kunye nama-48mm iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zezilayidi zetafile. Singazenza ngokwezifiso iimbaleki zolwandiso lwetafile yakho ngokokuyilwa kwetafile yakho. Ukuba unomdla kwizilayidi zethu zetafile ezandisiweyo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.